MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကချင်ကို အပြတ်ချေမှုန်းရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ် လွှတ်တော်တွင် ပြော
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) အား အပြုတ်တိုက် ချေမှုန်းနိုင် မှသာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အာ ဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) မှ လွှတ်တော်အမတ် ဦးလှဆွေက ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ပြောဆို ဆွေးနွေးကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နှင့် ဂျပန်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်သည် လည်း ညှိမရသည့်အတွက် ဗုံးကြဲလိုက်မှသာ ကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးသွား ကြောင်း ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးလှဆွေက ဥပမာပေး၍ ပြောဆိုသည်။
“ဗုံးနှစ်လုံး ကြဲထည့်လိုက်တော့မှ ဟိုကောင်တွေက ချက်ချင်းလာပြီးတော့ စစ်သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုးသွားတယ်၊ လက်နက်ချပါပြီ ဆိုပြီးတော့။ ဒီတော့ ကျနော်ပြောလိုတာက ရွှေလက်နဲ့ ခေါ်နေတုန်း မလာတဲ့ KIA ကိုလည်းပဲ Bullet ပေးလိုက်ရင် ကောင်း မလားပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
ဦးလှဆွေ၏ ပြောဆိုမှုသည် စစ်တပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်စား ပြုထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၏ အာဘော်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရင်ထဲမှ ဆန္ဒ အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ တမီလ်သူပုန်များအား အစိုးရက အပြုတ်တိုက်ပုံနှင့် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန် စစ်ပွဲသည်လည်း ဂျပန်ကို ဗုံးကြဲလိုက်၍ ငြိမ်းချမ်း ရေးရကာ လက်ရှိတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုးတက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ KIA ကို အပြုတ် တိုက်နေခြင်းသည်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း စသည့်ဖြင့် ဦးလှဆွေက ဆွေးနွေးသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ်များက ပြောသည်။
“KIA ကို အပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။ ဥပမာ – ဂျပန်ကို အမေရိကန်က ဗုံးကြဲပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ရတယ်။ သီရိလင်္ကာမှာ တမီလ် သူပုန်တွေကိုလည်း သမ္မတက အပြတ်ချေမှုန်းပြီးမှ ပြည်တွင်းငြိမ်း ချမ်းရေး ရတယ်ဆိုပြီး KIA ချေမှုန်းရေးကိစ္စကိုပဲ စောင်းပေးဆွေးနွေး တယ်” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခက်ထိန်နန်၏ “ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှုရှိမည့် ခိုင်မာသော အခြေခံမူများ ချမှတ်ပေး ရေး” အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးလှဆွေက KIA ကို အပြတ်ချေမှုန်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ စုစုပေါင်း ၂၉ ဦး ဆွေးနွေးရန်ရှိပြီး ယမန်နေ့ က ၁၄ ဦး ဆွေးနွေးကာ ကျန်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ယနေ့ ဆွေးနွေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
ကချင်စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ယမန်နေ့က ၁၄ ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးကြရာတွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၏ ဆွေးနွေးမှုသည် KIA အား အပြတ်ချေမှုန်းရေးကိုသာ ဦးတည် ဆွေးနွေးကြကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များကမူ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး ကိစ္စကို စောင်းပေး ဆွေးနွေးကြကြောင်း ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ အမျိုးသားလွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်သည် ၆၆ နှစ်ရှိဖြစ်၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကိုသာ အဓိက ဦးစားပေး ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တန်းတူရေးအတွက် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက် နိုင်ရေးသည်လည်း ပြည်တွင်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါ ကြောင်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ဆိုသည်။
ကချင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်ထူးက ဆွေးနွေးရာတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ပထမဆွေးနွေး သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးမှသာ ကြာရှည်သည့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှု (Political Dialogue) ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ပြောဆိုဆွေးနွေးကြောင်း ယနေ့ထုတ်အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ရေးသား ထားသည်။
KIA /KIO အဖွဲ့ကမူ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုကို အစိုးရနှင့် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကိုသာ ပထမ လုပ် ဆောင်လိုတော့ကြောင်း ပြောဆိုနေ၍ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ရလိုပါက နိုင်ငံ ရေးအရ မဖြစ်မနေ ဆွေးနွေးရန်နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန် တတိယ အင်အားစု ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်များထားရေး၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ၌ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်၍ အဖြေရှာပြီးပါက “ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ရေး အာမခံချက် ပေးရေး” ကိစ္စများကို အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ရှမ်း ပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ဦးစိုင်းကျော်ဇောသန်း ကလည်း ဆွေးနွေးသည်။
တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အရ စစ်တပ်သည် သီးသန့် ဖြစ်နေပြီး အာဏာ ပိုမိုရှိနေသည့် အဖွဲ့အ စည်း ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာ၏ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကချင်အား ထိုးစစ်မဆင်ရန် သမ္မတက အမိန့်ပေးသော်လည်း စစ်တပ်က လိုက်နာမှု မရှိပုံတို့ကို ထောက်ပြ ဆွေးနွေး ကြကြောင်း သိရသည်။
“ဒီမိုကရေစီ စနစ်သွားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ စစ်တပ်ဟာ သမ္မတ လက်အောက်မှာ ရှိနေဖို့နဲ့ အာဏာ အရပ်ရပ်ဟာ လည်းပဲ ပြည်သူတရပ်လုံးဆီမှာ ရှိဖို့၊ ပြည်သူ့ထံ အပ်နှင်းထားဖို့ လိုပါ တယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ပြင်စရာ စာပိုဒ်အချို့ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းနေပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဆိုသည်။
at 1/25/2013 07:28:00 PM
အရမ်းကို ကြိုက်တဲ မှတ်ချက်လေးပါ
လူစကားမတတ်တဲ့ ဖွတ်အမတ်လှဆွေကို သင်ပေးလိုက်မယ်။ မသေမချင်း မှတ်ထား။ ဂျပန်ကို အမေရိကန် ဗုံးကြဲတာ နိုင်ငံ၂ခု အတိအလင်း စစ်ကျေညာပြီး စစ်ဖြစ်တာ။ ပြည်တွင်းစစ်မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၇၀လောက်က ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေကြတာ။ ဘယ်သူမှ အားမပေးတဲ့ကိစ္စကြီး။ သီရိလင်္ကာက တမီးကျားအဖွဲ့ဆိုတာ အီးယူ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နိုင်ငံတွေအပါအဝင် ဥရောပနိုင်ငံအများစုက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ အတိအလင်း စာရင်းသွင်း ကျေညာထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ အဲ့ဒါကြောင့် သီရိလင်္ကာအစိုးရနဲ့ စစ်ဖြစ်တော့ အကြီးအကျယ် မတားကြတာ။ ဒါတောင် နောက်ပိုင်းတက်လိုက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဒုနဲ့ဒေး၊ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးအထိ တရားစွဲခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဘာမှမသိလဲ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲ အေးအေးဆေးဆေး ငိုက်နေ၊ ထထမအူနဲ့။
ဦးလှရွှေပြောသလို စစ်သားဦးရေ နဲ့ ပြောကြေး ဆိုရင်...
ကေအိုင်အေ က နှစ်သောင်းဝန်းကျင်လောက်သာ ရှိပြီး ကချင်လူဦးရေ ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိလို့ ကချင်တမျိုးလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး လို့ ဆိုရင်...
လူဦးရေ လေးသိန်းမျှသာ ရှိတဲ့ ဗမာ စစ်တပ်ဟာ...
မြန်မာပြည်သား သန်း ၆၀ ကျော်မှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်တော့ ဘယ်လိုလုပ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားပြု တပ်မတော် ဖြစ်မလဲ...
Anonymous January 25, 2013 at 8:32 PM
ဦးဏှောက်မရှိတာ သိသာတယ် ...
ခွေးလို အတွေးနဲ့ လွတ်တော်ထဲမှာ ထထ ဟောင်နေတယ် ....
Anonymous January 25, 2013 at 10:40 PM
Anonymous January 26, 2013 at 4:48 AM
ဆဲဆိုယုံပဲတက်ပြီး ဘာမှမသိ၊ မစဉ်းစား မဆင်ခြင်တတ်တဲ့လူဆိုရင် စစ်ခွေးနဲ့ စစ်ခွေးရဲ့ နောက်လိုက်တွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ထားလိုက်ပါတော့ သေတဲ့လူတွေလည်း သေနေပြီ လူတွေကတော့ လျောက်အူလို့ကောင်းနေတုန်းပါပဲလား
အေးဗျာ ခင် ဗျားလိုသည်းခံစိတ်နဲ့တုန့်ပြန်တတ်တာကောင်းပါတယ်